Video Archives - Lifestyle Myanmar
YouTube မှာ ကိုယျပိုငျဗီဒီယိုတှတေငျပွီး ပိုကျဆံရှာခွငျးဟာ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ channel ကို subscriber တှတေိုးလာစဖေို့အတှကျ YouTuber တှဟော နညျးလမျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ကွိုးစားနကွေပွီး သူတို့ပွုလုပျတဲ့အတိုငျး လိုကျလံပွုလုပျကွညျ့ကွတဲ့ သူတှလေညျး မနညျးပါဘူး။ သူတို့ပွုလုပျပွတဲ့ တခြို့နညျးလမျးတှဟော လူတှအေတှကျ အန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့ အရာတှဖွေဈလို့ အသကျမပွညျ့သေးတဲ့ ကလေးငယျတှေ တုပပွီး မပွုဖို့ မိဘတိုငျးဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။...
အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှဟော လူတှကေိုပြျောရှငျစပွေီး အဖျောပွုပေးနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှေ အားလုံးထဲမှာ ခှေးဟာ လူနဲ့အနီးကပျဆုံး ရှိနတေဲ့ တိရိစ်ဆာနျလေးတှေ ဖွဈကွပွီး သူတို့ကို လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးရတာလညျး အခွားတိရိစ်ဆာနျတှထေကျ ပိုမိုလှယျကူပါတယျ။ တိရိစ်ဆာနျအမြားစုကတော့ သူတို့အပျေါမတ်ေတာထားတဲ့ သူတှကေို ပွနျလညျမတ်ေတာထားတတျကွပွီး အမွဲတမျးသစ်စာရှိနတေတျပါတယျ။ Lila လို့ချေါတဲ့ ခှေးမလေးကတော့ သခငျဖွဈသူရဲ့ သငျကွားထားမှုနဲ့အတူ အခွားခှေးတှမှော မရှိတဲ့ အရညျအခငျြးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူမဟာ...
တရုတျနိုငျငံ အနောကျတောငျပိုငျးက လူနအေဆောကျအအုံတဈခုမှာ ၃နှဈအရှယျကလေးတဈယောကျ အဆောကျအဦးရဲ့ ၆ထပျကနအေောကျကို ပွုတျကခြဲ့ပမေယျ့ အိမျနီးခငျြးတှကေ အတူတူပူးပေါငျးပွီး ကယျဆယျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ အဆိုပါ တုနျလှုပျဖှယျအဖွဈအပကျြကို တနင်ျလာနကေ့ Jiulongpo District, Chongqing ကနမှေတျတမျးတငျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ https://youtu.be/yTT0ZAuqPcA ဗီဒီယိုမှတျတမျးအရ ကလေးငယျဟာ ၆ထပျတိုကျရဲ့ ဝရံတာလကျရမျးမှာ တှဲလောငျးအနအေထားတဲ့ အောကျကိုမကအြောငျ ဆုပျကိုငျထားပါတယျ။ ကံကောငျးစှာနဲ့ပဲ အိမျနီးခငျြးတှကေ အခြိနျမီသိရှိခဲ့လို့ အဆောကျအဦးရဲ့ အောကျ...
၁။ သူနဲ့ အတူရှိစဉ်အခါက အစစအရာရာ အသေးအဖွဲ့လေးကအစ သူ့အပေါ် အားကိုးမိတဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့အခါ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ရည်းစားဟောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၂။ သူရှိတုန်းက အသေးအဖွဲလေးကအစ ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်မိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘေးမှာသူမရှိမှန်းသိရတဲ့အခါ ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကို မေ့ဖျောက်ပြီး သတ္တိတွေ မွေးလာနိုင်တဲ့အတွက် ရည်းစားဟောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၃။ သူကိုယ့်ဘေးမှာရှိတုန်းက Hero...
တကယ်ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုပဲ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေပါစေ အမြဲရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီးသားပါ။ #Lifestyle_Myanmar #Thar_Nage https://youtu.be/WSNdCY0Qp-g
ခလုတ်ထိမှ အမိတ ဆိုသလို ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ပြဿနာတွေ၊ ဒုက္ခတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ မိဘတွေဆီ ခြေဦးလှည့်တတ်ပြီး အဆင်ပြေနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းလေးတောင် ဆက်ဖော်မရကြပါဘူး။ #Lifestyle_Myanmar #Lifestyle_Animation #Thar_Nage https://youtu.be/ErsKq6S6304
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချော့ဖို့ဆိုတာ သိပ်ခက်တဲ့အရာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကက နွေးထွေးမှု၊ ကြင်နာမှုလေးတွေ ပေးဖို့ပဲလိုတာပါ။ ? https://youtu.be/QXs98IAC9X0 #Lifestyle_Myanmar #Lifestyle_Animation #Animation_Video ငါးမိနစ်တစ်ခါ စိတ်ပြောင်းတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ သဘာဝ အပိုင်း(၂)
ငါးမိနစ်တစ်ခါ စိတ်ပြောင်းတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ အကြောင်းကို ပြောလို့ကုန်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးကွယ်၊ နောက်ထပ်အပိုင်း (၂) ကို ထပ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တူတယ်ဆိုရင် ရှိတ်လိုက်တော့ ? https://youtu.be/5TI2bwMLm58 #Lifestyle_Myanmar #Lifestyle_Animation #Animation_Video ဒီလိုအရာတွေဟာ မိဘတိုင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဘေဘီ့ကိုမေးလိုက်ပါ၊ ငါးမိနစ်တစ်ခါ စိတ်ပြောင်းနေရတာကို ပျော်ရဲ့လားလို့ ? https://youtu.be/8Mq6pAvrv64 #Lifestyle_Myanmar #Lifestyle_Animation #Animation_Video ဒီလိုအရာတွေဟာ မိဘတိုင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်
လူတိုင်းကို အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်မိပါစေနဲ့ https://youtu.be/hGRgeVb914U ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်အချို့